नन् क्यान्सरका डाक्टरले जथाभावी क्यान्सरको उपचार गरिरहेका छन्
नेपाल अवुर्दरोग निवारण संस्था २०३९ सालमा स्थापना भै प्राणघातक मान्ने गरिएको क्यान्सर रोगको क्षेत्रमा क्रियाशिल नेपालमै पहिलो गैह्र नाफामुलक संस्था हो । संस्थाले नेपालका ४६ वटा जिल्ला शाखा मार्फत क्यान्सर रोग नियन्त्रण र निवारणका लागि जनचेतना अभिबृद्धि सम्वन्धी कार्यक्रमहरु संचालन गरिहेको छ । क्यान्सर के हो ? नेपाल अवुर्दरोग बिवारण संस्था यसले क्यान्सर रोगका क्षेत्रमा संचालन गरिरहेको गतिबिधी के कस्ता छन् । सरकारको नितिगत पहल र प्रयत्न कस्तो छ आदि बिषयमा नेपाल अवुर्दरोग निवारण संस्थाका केन्द्रिय अध्यक्ष ईश्वर श्रेष्ठसंग हाम्रा सम्बाददाता कृष्णराज शाक्यले गर्नूभएको कुराकानी ।
नेपाल अवुर्दरोग निवारण संस्थाका बारेमा बताईदिनुस न ?
नेपाल अवुर्दरोग निवारण संस्था २०३९ सालदेखि क्यान्सरको क्षेत्रमा काम गरिरहेको नेपालकै लगानीमा संचालित गैह्र नाफामुलक संस्था हो । यसले नेपालमै पहिलो पटक नमुनाको रुपमा भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल स्थापन गरि संचालन गरिरहेको छ । अहिले देशको ४६ जिल्लामा यसले आफ्ना शाखाहरु मार्फत क्यान्सर सम्वन्धी प्रिभेण्टीभ र क्युरेटिभ सेवा संचालन गरिहेको छ भने गत बर्ष देखि सिराहा जिल्लाको लाहानमा समेत क्यान्सर केयर सेण्टर स्थापना गरि क्यान्सर सम्वन्धी प्रिभेन्टिभ र क्युरेटिभ सेवा दिँदै आएको छ ।
यसले हालसम्म क्यान्सर रोग सम्वन्धी के कस्ता गतिबिधी गर्दैआएको छ त ?
यसले क्यान्सर रोगको नियन्त्रण र निवारणका लागि सरकार र गैह्रसरकारी संस्था संगको सहकार्यमा देशका बिभिन्न स्थानहरुमा धुम्रपान निषेध, नियमित स्वास्थ्य परिक्षण र क्यान्सर रोग सम्वन्धी अन्य जनचेतनामुलक कार्यक्रम देशका ४६ जिल्लामा रहेका शाखा मार्फत संचालन गर्दैआएको छ भने सरकारलाई क्यान्सर रोगका बारेमा उचित परामर्श समेत दिँदै आएको छ ।
नेपालमा क्यान्सर रोगको अवस्था कस्तो देखिन्छ ?
अहिले नेपालमा नयाँ र पुरानो गरि १ लाखको हाराहारीमा जति क्यान्सरका बिरामी छन् । थप हज्जारौंको संख्यामा क्यान्सर रोग भएकाहरु स्वास्थ्य संस्था सम्म आईपुगेका छैनन् । सरकार संग के कति नागरिकहरु क्यान्सरबाट पिडित छन भन्ने कुनै आधिकारीक तथ्यांक उपलब्ध नहुँदा क्यान्सरबाट अकालमा ज्यानगुमाउने नागरिकको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । अहिले हामीले प्राप्त गरेको तथ्यांक अनुसार करिव १ लाख नागरिक क्यान्सर रोगबाट पिडीत छन् भने बर्षेनी ३५ हजारको संख्यामा क्यान्सरका बिरामीहरु थपिँदो अवस्थामा रहेका छन् ।
के कारणले क्यान्सर रोग लाग्ने गरेको पाईन्छ ? यसको नियन्त्रणका लागि के गर्न सकिएला त ?
क्यान्सर रोग बिल्कुल सामान्य रोग हो समय समयमा नियमित रुपमा स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने,, खानपानमा उचित ध्यान दिने, सुर्तिजन्य, बिषादीयुक्त तथा अखाद्य बस्तुहरुको नियमित अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने हो भने धेरै हदसम्म क्यान्सरबाट बच्न सकिन्छ । जनचेतनाको कमी, मिसावटयुक्त खानपान, धुवाँधुलो, जंकफुड र अखाद्यय चिजको बढ्दो प्रयोगका कारण क्यान्सर रोगिको संख्या भयावह रुपमा बढ्दै गएको बिभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । जस्तै जंकफुडहरुस मिसावट युक्त खानेकुराका कारण र बिषादीयुक्त चिजबिज बिक्रीमा सरकारले कडा कदम चाल्ने हो भने मात्रैपनि ५० प्रतिशत बढि क्यान्सर रोग नियन्त्रण हुन्छ ।
क्यान्सर लाई प्राणघातक रोगका रुपमा लिने गरिएको छ । के क्यान्सरलाई प्राणघातक रोग भन्न सकिन्छ ?
अव कतिपय अवस्थामा क्यान्सरलाई समाजले प्राणघातक रोगका रुपमा लिनेगर्छन जुन बिलकुल गलत छ । अधिकांश क्यान्सर रोगको समयमा उपचार हुनेहो भने यसबाट बच्न सकिन्छ । १ लाख देखि ५ लाख खर्च गर्नेहो भने क्यान्सर रोगबाट उन्मुक्ति पाउन सकिन्छ तर लापर्वाही, हेलचेक्राई र सामान्य कुरामा ध्यान नपुग्दा क्यान्सरबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दो छ । त्यसैले नेपाल अवुर्दरोग निवारण संस्था हरेक क्यान्सर पिडितले नेपाल सरकारबाट पाउने गरेको रु १ लाख लाई बढाएर ५ लाख पुर्याउनु पर्छ भन्ने पक्षमा सरकार संग परामर्श गरिरहेको छ । यस अघिको सरकारका पालामा बिपन्नलाई राहत स्वरुप जिवीकोपार्जनका लागि भनेर मासिक रुपमा रु. ५ हजार दिने गरिएको थियो । तर वर्तमान सरकारले क्यान्सर पिडीतलाई दिँदै आएको उक्त ५ हजार समेत काटिएको छ त्यसमा समेत थप गरि पुन दिने ब्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ । । यसरी राहतका रुपमा आएको रकम काट्दा पिडितलाई थप निरुत्साहित बनाउने काम भएकाले उक्त सेवा केहि थप रकमका साथ पिडीतले पाउने ब्यवस्थाका लागि नेपाल अबुर्दरोग निवारण संस्था लागिपरिरहेको छ । सरकारले क्यान्सर रोगको नियन्त्रण र उपचारका लागि हामीजस्ता यसै क्षेत्रमा संलग्न लामो अनुभव बोकेका संघसंस्थालाई थप हौसला र साथ दिन आवश्यक छ ।
क्यान्सर रोगको उपचारका लागि ठुलो खर्च लाग्छ भन्ने गरिन्छ नि ?
अहिले संबिधानले नागरिकको स्वास्थ्यमाथीको पहुँचलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । हाम्रो जस्तो बिकासोन्मुख देशमा क्यान्सर रोगको अवस्था भयावह छ त्यसैले थप जनचेतना ग्रामिण भेगसम्म पुर्याउन जोड दिँदै सरकारले हरेक ब्यक्तिलाई बिमा पोलीसी भित्र समेट्न आवश्यक छ । क्यान्सरको उपचारका लागि ठुलो खर्चको कुरा सुन्ने गरिन्छ जुन बिल्कुल गलत र भ्रामक कुरो हो । समय समयमा नियमित स्वास्थ्य परिक्षण नेपालमा त्यति महंगो छैन । यदि क्यान्सर रोग लागि नै हाले पनि यसको सहि उपचारले क्यान्सरबाट पिडीतलाई पुर्ण रुपमा निको पार्न सकिन्छ । अहिले समयमा उपचार हुने हो भने क्यान्सर रोग थोरै खर्चमा नै निको बनाउन सकिन्छ । तर क्यान्सरको नेपालमै उपचार गर्ने हो भने २ देखि ५ लाखमा अहिले पनि बिरामीको उपचार नेपाल अवुर्द रोग निवारण संस्थाद्धारा संचालित भक्तपुर क्यान्सर हस्पीटलले गरिरहेको छ । अधिकांस क्यान्सरका बिरामीहरु पुर्णरुपमा ठिक भएर गैरहेका पनि छन् । क्यान्सरको राम्रो उपचार नेपाल भित्रै सहज ढंगले अत्याधुनिक प्रबिधिका साथ दक्ष जनशक्तिबाट हुन्छ भन्ने कुरामा बिश्वास नहुँदा प्रसस्त रकम बाहिरीरहेको छ ।
क्यान्सरको भयावह अवस्था छ भन्नु भयो अव यसको नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकार कसरी अघि बढ्नुपर्ला ?
क्यान्सर रोगको नियन्त्रण र पिडितको आर्थिक अवस्था धराशायी हुनबाट जोगाउनु सरकारले बिभिन्न क्यान्सर रोग रोकथामका लागि सचेतनामुलक कार्यक्रममा प्राथमिकता दिन आवश्यक देखिन्छ । हामीले जिल्ला जिल्लामा प्याप स्पेयर सेवा संचालन गरेका छौं । क्यान्सर रोग सम्वन्धी बिभिन्न जनचेतनामुलक कार्यक्रम गरिरहेका छौं । दक्ष जनशक्ति सहित जिल्ला जिल्लामा शिवीर संचालन गर्ने क्रममा ठुलो आर्थिक भार पर्दैआएको छ । स्थानीय तह र सरकारबाट आर्थिक लगायत अन्य सहकार्यको कुनै पहल भैरहेको छैन त्यसैले सरकार र स्थानीय तहहरु सवैले यसलाई समस्याको रुपमा लिईदिनुपर्याे र आवश्यक सहकार्यको बातावरण तैयार गरि सहकार्यकै माध्यमबाट क्यान्सर बिरुद्धको लडाई लड्न अग्रसरता देखाउनु पर्याे । बिषेस गरि नेपाली महिलाहरु स्तन तथा पाठेघरको क्यान्सरबाट पिडीत छन् । जनचेतना अभाव र सामाजिक संकुचनका कारण सामान्य रुपमा रहेको पाठेघरको समस्या भएका महिलाहरु क्यान्सर बोक्न बाध्य छन् । त्यसैले देशका हरेक स्थानीय तहमा प्याप स्पेयर सेवालाई प्रभावकारी रुपमा लैजानुपर्छ । जसले क्यान्सर लाग्न अगावै नियन्त्रण गर्नका साथै धेरैको ज्यान जोखिममा पर्नबाट बचाउन सकिन्छ ।
नेपाल अबुर्दरोग निवारण संस्थाले नेपालमै पहिलो पटक अर्थात २०३९ देखि क्यान्सरको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ भन्नु भयो यो अवधीमा संस्था मार्फत उल्लेखनिय कार्य चैं के भयो त ?
क्यान्सर रोगको प्रमुख कारण मानिएको धुम्रपान निषेधका सैयौं अभियानहरु संचालन गरेका छौं । यसै क्षेत्रमा लामो समय संलग्न भै कार्यगरेकाले संस्थाले संघालेका अनुभवका आधारमा सरकारलाइ निरन्तर सल्लाह सुझाव र परामर्श समेत उपलब्ध गराउँदै आएका छौं । धुम्रपान मध्यपान, बिषादीप्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न गाउँस्तरसम्म बिभिन्न सचेतनामुलक अभियान संचालन गरेका छौं । क्यान्सरमुक्त समाज निर्माणका लागि जिल्ला स्थीत नेपाल अवुर्दरोग निवारण संस्था मार्फत क्यान्सरका बिरुद्धमा सचेतना फैलाउन बिभिन्न जनचेतनामुलक पोशाखा सरकार संग सहकार्य गरि सुर्तिजन्य बस्तुको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न खतराको चिन्ह अंकित स्टीकर र समुदायस्तर सम्म तालिम तथा सचेतनाका कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौं । अहिले हरेक धुम्रपानजन्य बस्तुमा टाँसिएका बिभत्स स्टीकर नेपाल अवुर्दरोग निवारण संस्थाको पहलमा सरकार संगको सहकार्यमा टाँसिएका हुन् जसले धुम्रपान र मध्यपानलाई धेरै हदसम्म न्युनिकरण गरिरहेको छ । अधिकांश क्यान्सरका कारण धुम्रपान र मध्यपान नै भएकाले धुम्रपान र मध्यपान नियन्त्रणका लागि बिद्यालय, स्वास्थ्य संस्था लगायत अन्य सार्वजनिक स्थलमा सेवन र बेचबिखनमा रोक लगाउने, हाम्रो सल्लाह सुझावलाई ढिलै भएपनि सरकारले शुरुआत गरेको छ । अहिले नेपाल भित्रै निशुल्क रुपमा क्यान्सर पिडीतको उपचार हुनुपर्याे भन्ने मागका साथ हामी अघि बढिरहेका छौं । नेपाल अवुर्दरोग निवारण संस्थाकै पहलमा अहिले गरिव तथा आर्थिक बिपन्न नागरिकको निशुल्क उपचारका लागि हामीले आवाज उठाइरहेका छौं । कुनैपनि क्यान्सर रोगी उपचारका लागि बाहिर जानपर्ने भए नेपाल अबुर्दरोग निवारण संस्थाकै परामर्श र शिफारिशमा नेपाल एयरलायन्सले निशुल्क टिकटको समेत ब्यवस्था गरको छ । त्यतिमात्र नभएर नेपाल अवुर्दरोग निवारण संस्थाले परामर्श सेवा तथा उपचारात्मक सेवा सम्वन्धी अनलाईन सेवा समेत संचालन गरिरहेको छ । निशुल्क हेल्पलाईन टेलिफोन सेवा मार्फत धुम्रपान त्याग्न तथा क्यान्सरबाट पिडीतका लागि हेल्पलाईन टेलिफोन सेवा संचालन गर्दैआएको छ ।
अव सरकारले चैं के गर्नूपर्याे त ?
क्यान्सरको प्रभावकारी उपचार बिधी रेडीयो थेरापी सेण्टर ७ प्रदेशमै निशुल्क सेवा दिने गरि स्थापना गर्नूपर्याे । केमो थेरापी सेवा क्षयरोग (टीभि) को औषधी जस्तै निशुल्क उपलब्ध हुनपर्याे । अहिले तिनै तहका सरकारले नागरिकको स्वास्थ्यलाई प्राथ्िरमकता त दिएको छ तर ति प्राथमिकताका आधारहरु बिश्वासनिय र दरिलो देखिँदैनन् । सरकारले ल्याएका स्वास्थ्य सम्वन्धी कतिपय नितिहरु राम्रा छन् तर तिनको ब्यवहारीक प्रयोग र कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो छ । त्यसैले समयानुशार नितिगत सुधारमा जोड दिई कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो र बिश्वाशिलो बनाउँदै क्यान्सरको क्षेत्रमा क्रियाशिल संघसंस्था संगको सहकार्यलाई थप प्राथमिकता दिनुपर्याे । क्यान्सर सम्वन्धी अनुभव प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीलाई थप हौसला तालिम र प्रोत्साहन गर्नूे निति अंगिकार गर्नूपर्याे । सरकारले सुर्तिजन्य पदार्थको रोक तथा नियन्त्रण र नियमन का लागि बिधेयक ल्याएको छ तर त्यसको कार्यान्वयन कडाईका साथ भैरहेको छैन जसले दिनानुदिन क्यान्सर रोगीको संख्या बढाईरहेको छ । सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान निषेध, निश्चीत एजगु्रपका आधारमा मात्र ठाउँ बिषेसको पहिचान गरि सुर्तिजन्य र धुम्रपानजन्य बस्तु प्रयोगमाथी दण्ड सजाय सहित नियन्त्रणको जरुरी छ । सरकारले घोषित नियमकानुनको कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नूसक्यो भने धेरै मात्रामा क्यान्सरबाट आफ्ना नागरिकलाई बचाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ ।
अर्काे महत्वपुर्ण कुरा के छ भने सातै प्रदेशमा सरकारले टोमो थेरापी, रेडीएसन मेसीन राख्नुपर्याे करोडौंको लगानीमा भित्रीएका अत्याधुनिक सामग्री प्रयोग बिहिन रुपमा राख्नुको सट्टा प्रयोगमा नआएका सामग्री क्यान्सरका क्षेत्रमा क्रियाशिल हामीजस्ता संस्थाहरुलाई सहुलियत रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्याे । अहिलेको प्रमुख समस्या नन्क्यान्सरका डाक्टरले जथाभावी क्यान्सरको उपचार गरिरहेका छन् सरकार र मेडीकल काउन्सीलले त्यस्ताहरुलाई नियन्त्रण, नियमन, अनुगमन गर्नूपर्याे । त्यस्ता अनाधिकृत उपचारमा संलग्न संस्था र चिकित्सकलाई कार्वाही गर्नसक्नुपर्याे । क्यान्सर हुनेबित्तिकै डराउनुपर्दैन । क्यान्सरका क्षेत्रमा क्रियाशिल संघसंस्था संगको सहकार्यमा जोड दिई भएका प्रबिधि र जनशक्तिलाई हौसला र प्रोत्साहन सहित थप तालिमको ब्यवस्था गर्न आवश्यक पहल गर्नूपर्ने देखिएको छ । क्यान्सर भयावह रोग हो भन्ने भ्रम र हल्ला मात्रै हो नेपालमा क्यान्सरको उपचारका लागि दक्ष जनशत्ती छ औजार उपकरण उपलब्ध छ । मात्र नेपाल सरकार र काउन्सीलले क्यान्सर डाक्टर पहिचान गरि उपचार बिधीमा सहयोग गर्नूपर्छ । क्यान्सर सम्वन्धी अनुभव नै नभएकालाई जथाभावी उपचार गर्नबाट रोक्न र नियन्त्रण गर्नमा बिषेस भुमिका निर्वाह गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
अहिले क्यान्सर रोग नियन्त्रणको क्षेत्रमा देखिएका प्रमुख समस्या चैं के के हुन त ?
अहिले बजारमा नन्क्यान्सरका डक्टरले पनि क्यान्सरको उपचार गरिरहेको छ जसबाट क्यान्सर रोग नियन्त्रण भन्दा पनि थप जटिल बन्दै गएको छ । त्यसलाई रोक्न तर्फ सरकारको बिषेस ध्यान जानुपर्याे । अहिले जथाभावी केमोको प्रयोग भैरहेको छ । जनरल सर्जनले क्यान्सरको उपचार गरीरहेको छ । क्यान्सर रोगका बारेमा सामान्य ज्ञान समेत नभएकाबाट उपचार गराएर सरकारले नै क्यान्सर रोगीलाई चाँडै मार्ने निति लिएजस्तो देखिएको छ । हामीसंग क्यान्सर उपचारका लागि मेक्सीमम पैसा बाहिरीरहेको छ । त्यसलाई रोक्नका लागि नयाँ जनशक्ति उत्पादन र भएका जनशक्तिको क्षमता अभिबृद्धिमा जोड दिनुसके क्यान्सर उपचारका नाममा बाहिरीरहेको अरवौं रकम स्वदेशमै रहने वातावरण श्रृजना गर्न सकिन्छ । जसबाट क्यान्सर रोगको उपचार र नियन्त्रणमा नेपाललाई दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट सेवाप्रदायक देशका रुपमा चिनाउन सकिन्छ । नेपाल अवुर्द रोग निवारण संस्था संग क्यान्सर रोग र त्यसको नियन्त्रणका लागि यथेष्ठ अत्याधुनिक सामग्री र दक्ष जनशक्ति छ तर सरकार देशमा भएको जनशक्ति र प्रबिधिको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न तर्फ उद्यत रहेको देखिन्छ । सरकार संग अहिले पनि क्यान्सर उपचारका लागि आवश्यक अरवौंको सम्पति छ तर भएका सामग्रीको सहि प्रयोग नहुँदा अरवौंको सम्पति खिया लागिरहेको छ यसतर्फ सरकारको अलिकति पनि ध्यान पुगेको छैन कि जस्तो देखिएको छ । सरकारले कि आफैं गर्नू कि यसै क्षेत्रमा क्रियाशिल हामीजस्ता अनुभवी संस्थालाई सौलियतमा उपलब्ध गराउनु सक्नुपर्याे । सरकारले क्यान्सर सम्वन्धी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नमा कुनै संकुचन मान्नु हुन्न ।